Intengiso yeKhoros: Intengiso yeendaba zeNtlalo kunye noLawulo lweShishini | Martech Zone
Intengiso yeKhoros: Intengiso yeendaba zeNtlalo kunye noLawulo lweShishini
I-Khoros inceda ii-orchestrate ezinkulu, zilawule, zipapashe, kwaye zilinganise imikhankaso yemidiya yoluntu eqhuba iziphumo zeshishini.
IKhoros 'yeQonga leMidiya yoLuntu ilinceda njani ishishini
Ukusebenza kweqela -Zisa onke amaqela akho, amajelo, kunye nomxholo kwiqonga elinye ekulula ukulamkela. Lawula amaphulo osasazo eendaba ezentlalontle kunye neencoko zexesha lokwenyani kwideshibhodi enye ngokusebenza ngakumbi kunye nokubonakala.
Nyusa umxholo wakho Sebenzisana, cwangcisa, kwaye ulawule imikhankaso ekujoliswe kuyo ekhuthaza unxibelelwano nabaphulaphuli bakho.
Imbono emanyeneyo yokusebenza Umxholo weshishini lokubeka ngaphezulu kweemetri zentlalo ezibaluleke kakhulu kwishishini lakho. Iideshibhodi ezinokulungiswa kunye nokuthumela ngaphandle kwedatha kukunceda ukuba uchithe ixesha elincinci ekutsaleni iimetrikhi kunye nexesha elininzi lokuphuhlisa amaphulo aqhuba ifuthe kwishishini.
Ulawulo kunye nokuthotyelwa -Qhuba ilizwi elingqinelanayo nelinyanisekileyo lokukhuthaza ukuthembana nabaphulaphuli bakho. Ukubonakala okuphakathi kunye nokulawula ukufikelela kwiakhawunti yakho, ukuvunywa komxholo, kunye namaqela athetha ukukhusela ukulingana kwegama kwinqanaba.
IKhoros yeNtengiso yezeNtlalontle kunye nokuMamela
Yonyusa uphawu lwakho ngokuthengisa okujolise kwimidiya yoluntu, ukubandakanyeka kwabathengi, ukhuseleko lwegama ngokubonakala kunye nolawulo kubukho bakho beendaba zosasazo, kwaye ulinganise izinto ezibalulekileyo kwi-brand yakho ngohlalutyo lwamajelo eendaba oluntu olubopha ixabiso lentlalontle.
IKhoros yeNtlalontle yezeNtlalontle
Hlala phambili kwintengiso yakho, ukhuphiswano lwakho, kunye nabaphulaphuli bakho ngolwazi olunamandla, kodwa olufikelelekayo. Lungiselela amaphulo ngokuqonda malunga nabaphulaphuli bakho, umxholo, kunye nentengiso. Lawula wonke umzuzu wobunzima ngobuchule enkosi kwi-real-time data, kunye nomphezulu wokhuphiswano lobukrelekrele ukwenza uphawu lwakho lubonakale.
Amava eKhoros yeendaba zeNtlalo
Cwangcisa kwaye wabelane ngomxholo wentlalontle kwaye wenze amava aqinisekileyo kwigama lakho lokuchukumisa ledijithali. Iqonga leKhoros lenzelwe injongo yokudibanisa nokudibanisa imisebenzi yokubandakanya abathengi-nokuba baphi abathengi bakho. Ukudityaniswa kweqoros yentlalontle kubandakanya i-Facebook, i-Instagram, i-LinkedIn, i-Twitter, kunye nePinterest. Ukudityaniswa kwenkonzo yabathengi kubandakanya uShishino lukaGoogle kunye neShishini leApple
Cela iDemo yeNtengiso yeKhoros
tags: Ukukhusela imidiya yoluntuIKhoros Enterprise Intengiso yezeMidiya yoLuntuimithombo yeendaba zentlalo ukumamelaSocial Media Marketing
Ulujonga njani uLuhlu lweeNgcaciso zaseKhaya